Warshadaha mashiinka faakiyuumka - Shiinaha mashiinada Vacuum Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Mashiinku wuxuu qaataa qufulka tooska ah ee pneumatic, qolka fayadhowrka oo aad u weyn, iyo nooca furfuran ee daah furan. Qolka faakiyuumku wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah, oo ku habboon kiimikada, cuntada, elektaroonigga, daawada iyo warshadaha kale.
Mashiinkaani waa mashiinka baakada faaruqinta ah ee banaanka, oo leh shaabad taagan, taas oo ku haboon baakada faaruqinta ama la buufin karo ee walxaha mugga weyn leh ama alaabooyinka qaarkood way fududahay in la shubo.
Mashiinkaani waa nooca miiska baakooyinka faakiyuumka lagu buuxiyo oo leh nidaam faaruq ah iyo qalabka qiiqa. Mashiinka oo dhan waa is haysta oo waxaa lagu dhejin karaa desktop-ka si loogu nadiifiyo faakiyuumka.
Mashiinkaani waa nooc ka mid ah noocyada banaanka ee baakada faakiyuumka, kumana koobna cabbirka qolka faakiyuumka. Waxay si toos ah u faaruqi kartaa (buufin kartaa) badeecada si ay sheyga u ahaato mid cusub oo asal ah, ka hortag, si loo kordhiyo keydinta ama keydinta sheyga muddada.
Mashiinka Baakadaha Vacuum-ka ee Waaweyn
Mashiinka ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan faakiyuumka mashiinka wuxuu qaataa qolka faakiyuumka birta ah ee birta ah iyo daboolida qalabka loo yaqaan 'plexiglass' oo aad u sarreeya. Mashiinka oo dhami waa qurux badan yahay waana ficil, waana sahlan tahay in la shaqeeyo.
Mashiinnada Baako Vacuum
Badanaa, baakadaha faakiyuumka ayaa ka saari doona dhammaan hawada ku jirta baakadka, sidaas darteed badeecada ku jirta bacda waa la sii hayn karaa muddo dheer.
Iyaga oo leh laba qol oo si is daba joog ah u shaqeynaya, mashiinka wax lagu duubo ee qolka labiska ah ayaa ka waxtar badan mashiinnada faakiyuumka dhaqameed.